AHA NKE NDAGWURUGWU UZO: NTDLL.DLL - DLL - 2019
Dezie njehie ntdll.dll
Maka ndị ọrụ na-achọ ịchọta ọchịchị ha na lotteries, na ụwa nke oge a, ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo, ma ọ bụ kama nke ahụ, ngwa pụrụ iche maka OS a, nyere aka. Banyere otu n'ime ngwa ndị a, onye ahịa ahịa nke Stoloto, anyị chọrọ ịgwa taa.
Nnukwu nhọrọ nke lotteries
Ihe di iche iche nke ugbo ala ndi ana eme na mpaghara nke Russian Federation di site na isi ihe ndi nkata. Ngosipụta ahụ dị mfe: a na-ahazi nhọrọ ndị ahụ site na otu, yana edepụtara nkọwa dị mkpirikpi nke oge, ụgwọ nke tiketi na mmeri ndị nwere ike. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhọrọ lorịja iji detụ ụtọ, site na ịhazi ụdị onyinye site na otu ma ọ bụ ọtụtụ njirisi.
Lelee ozi mgbasa ozi
Site na ngwa na ajụjụ, onye nwere ike ịhụ batrị ndụ. Nke a na-eme site na onye ọkpụkpọ ahụ, wee banye na onye ahịa, n'ihi ya ọ dịghị mmemme ọzọ ga-arụ ọrụ. N'okpuru windo ahụ na onye ọkpụkpọ ahụ, ịnwere ike ịlele ọkwa nke mgbasa ozi ọzọ.
Site na enyemaka nke Stoloto, ị nwekwara ike ịlele tiketi ịzụrụ na kiosks. Ụzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ site na nyocha QR code - ndị mmepe nyere ọbụna obere ntụziaka, nke ị nwere ike imeghe na bọtịnụ na akara akara akara. Otú ọ dị, nhọrọ a adịghị maka batrị niile, ya mere ederede ntuziaka nke ozi niile dị mkpa: dị ka eserese, ụbọchị ịbịaru na tiketi.
Lelee ozi na mmelite
Nye ndị nwere mmasị, ịlele akụkọ na akwụkwọ akụkọ dị iche iche na-emepụta: na ngalaba pụrụ iche nke ngwa ahụ, e nwere listi mbipụta na-enweta nsonaazụ, ozi na ozi ntanetị (dịka ọmụmaatụ, mmelite na iwu nke iduzi, okwu pụrụ iche banyere onye ọ bụla na-adọta ma ọ bụ aha nke batrị ndị a na-adịghị enwe).
Ndị nchịkọta mmeri
Na isi menu enwere ihe "Ndị mmeri"ebe ị nwere ike ịhụ ndepụta nke ndị meriri lotrị ndị na-adịbeghị anya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ntanet abụọ ga - esi na ya pụta: "Na nso nso a" ma "Ihe kachasị mma". Biko rịba ama na ndị ọrụ ahụ na-enye ozi a, ndị edebanye aha na ọrụ ahụ.
Map na kiosks kacha nso
N'ime ngwa nke ngwa na ajụjụ bụ ikike ịchọọ ebe ị nwere ike ịzụta tiketi lotrị. A na-edepụta ebe dị mma na map ahụ, usoro ahụ na-eburu ọnọdụ nke onye ọrụ ahụ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchọ.
Ebe ọ bụ na Stoloto bụ onye ahịa nke isi ọrụ, site na ngwa ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị (ma ọ bụ denye aha ọhụrụ) ma jikwaa ya: denye aha ma ọ bụ wepu aha na mailings, ịzụta ịzụta tiketi n'ịntanetị na ụzọ ịkwụ ụgwọ, tinye ma ọ bụ hichapụ data nkeonwe na ọtụtụ ndị ọzọ. Ikike na ngwa ahụ bụ ihe abụọ, n'ihi ya, ị pụghị ichegbu onwe gị gbasara nchekwa.
Nkwurịta okwu nkịtị na nkwado
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ngwa ma ọ bụ ọrụ ahụ, na Stoloto enwere ohere ịkọ ha na nkwado - pịa bọtịnụ na foto ozi na mpịakọta nke windo na mkparịta ụka na onye ọrụ ọrụ nkwado ọrụ ga-apụta. Biko mara na maka ohere a, ị ga-edebanye aha na ọrụ ma tinye akaụntụ gị site na ngwa ahụ.
Inwe obi iru ala na ntanye oru na nlele ihe di iche iche;
Lelee ozi mgbasa ozi na-adọta;
Lelee tiketi ozugbo site na ngwa ahụ.
Ngwa ahụ na-arụ ọrụ na-ejide ngwa ngwa na-adịghị ike ngwaọrụ;
Site n'oge ruo n'oge mgbasa ozi mgbasa ozi na-apụta (naanị ndị ọrụ si na Russia).
Mgbe anyị tụlechara ike nke onye ahịa Stoloto, anyị nwere ike ịchọta nkwubi okwu a: ngwa ahụ dum dị ka ihe ịga nke ọma, arụ ọrụ dị mkpa dị mkpa, yana dịka mgbakwunye dị mma, enwere ohere ịkpọtụrụ nkwado nke ọrụ ahụ. N'iburu na nke a bụ usoro mmemme, enwere ike ileghara ihe ndọghachi azụ ya anya, n'ihi na ụzọ ndị ọzọ dị ize ndụ.
Download Stoloto maka n'efu
Download ihe ọhụrụ nke Stoloto site na weebụsaịtị